कक्षा ५ मा पढ्ने बालकले आफ्नै महिला प्रिन्सिपलसँग माया बसेर लेखे यस्तो प्रेमपत्र, जस्ले पाए यस्तो सजाए ! – Eshankharapur
एउटा तिन कक्षा र अर्का पाँच कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई दिइएको सजायको कारण भने निकै उदेकलाग्दो छ । आफ्नै विद्यालयको प्रिन्सिपललाई प्रेम पत्र लेखेका कारण ति दुई मध्ये एक बालकलाई त्यसरी बाँधिएको हो ।
अर्काले कक्षा कोठामा हल्ला गरेको सजाय पाएका हुन् । ति अबोध बालकको मनमा आफ्नै विद्यालयको प्रिन्सिपल माथि माया पलाएपछि उनले प्रेम पत्र लेखे । प्रोढ उमेरकी ति महिला प्रिन्सिपलका लागि त्यो सह्य भएन । उनले बालकलाई सम्झाउनुको साटो सजाय दिने निर्णय गरिन् । उनकै निर्देशनमा बालकलाई हात खुट्टा बाँधिएर राखिएको हो ।
ति अबोध बालकले देखाएको प्रिन्सिपल प्रतिको प्रेम पनि त्यसैको परिणाम हो । तर ति बालकले भने मायाको बदला सजाय पाउनुपर्यो । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको यो घट ना आन्ध्र प्रदेशको एक स्कुलको हो । अनन्तपुर जिल्लाको कादिरी नगरपालिकास्थित मासानम्पेट निम्न माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययनरत यि बालकले आफ्नै प्रिन्सिपललाई प्रेम पत्र लेखेका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा तस्वीरसहित उक्त घटना सार्वजनिक भएपछि सामाजिक कार्यकर्ताहरु प्रिन्सिपलमाथि कडा कारवाही हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । स्थानीय प्रशासनले समेत घटनाको छानबिनका लागि आदेश दिइसकेको छ ।
लकडाउन अबधिमा भारतबाट मात्र चार अर्बको तरकारी आयात, नेपाली तरकारी भने बारीमै !!